Ngwa 5 dị mkpa maka akwarium gị | Azu
Mgbe ịmalitere na ụwa aquariums ị kwesịrị ịma na ị ga-azụta ụfọdụ ngwa maka azụ gị. Ọ bụghị naanị ịzụ azụ, akwarium na mmiri, mana ị ga-achọ usoro mgbakwunye nke mere na ihe niile na-arụ ọrụ n'ụzọ ziri ezi. Na nke a, anyị ga-egosi gị ihe ha bụ ngwa kacha mma maka akwarium gị ka i wee mara nke ọma ihe ị kwesịrị inweta.
Y’oburu na inwere mmata imata njirimara ya na oru nile nke ihe ndi a, nke a bu post gi 🙂
Ndụmọdụ tupu ịzụrụ ngwa
Tupu ịsụ ọsọ ịzụta n'ahịa azụ ma ọ bụ n'ụlọ ahịa anụmanụ, ọ dị mkpa ịmara nke ọma ihe dị mkpa. Mkpa akwarium nke ọ bụla dị iche, agbanyeghị na ha niile nwere otu olu. Dabere na ụdị azụ ị ga - ewebata, oke aquarium, ahịhịa mmiri, wdg. Ha ga-achọ ụfọdụ ngwa ma ọ bụ ndị ọzọ.
Ihe mbụ ịmara bụ mkpa nke azụ anyị ga - enwe n'ime akwarium. O bughi otu ihe ahu inwe azu mmiri di nma karie nke nnu nnu. Ọ bụghị otu ihe ahụ inwe azụ azụ ebe okpomọkụ karịa ndị ọzọ site na mmiri oyi. Fọdụ ga-achọ ezigbo osisi na ndị ọzọ nwere ụfọdụ plastik eji achọ mma ga-enwe ike ibi nke ọma.
Ihe ọtụtụ mmadụ na-eme ma ha banye n’ụwa a bụ ka ha zụta ọtụtụ ngwa. Ihe a niile iji nwekwuo aesthetics. Agbanyeghị, ọtụtụ n'ime ha enweghị isi ma mesịa belata ohere igwu azụ, oge anyị na, n'ezie, ego.
Nhọrọ kachasị mma na ịnwe ngwa bụ na akwarium ahụ na-adịkarị ọcha ma dịkwa ọcha. Ma ọ bụghị ya, ọbụlagodi na anyị nwere ya, ọ ga-adị ka a na-elekọta ya nke ọma.
Ngwa kacha mma maka akwarium
Ọzọ anyị ga-ede ndepụta nke ngwa ndị akwarium chọrọ n'ezie nke ga - enyere gị aka ilekọta azụ ahụ. Ngwa ndi ozo bu ihe eji achọ mma ma ghara inye ihe bara uru.
Tetra IN 300 tinyere nyocha ...
Ihe nzachaha dị oke mkpa na akwarium. Okwesiri inwe ma ọ dịkarịa ala otu. N’ụzọ dị otu a anyị na-ahụ na edobere ọnọdụ dị mkpa maka azụ ga-adị ndụ. Ihe nzacha Ọ bụ ha na-ahụ maka ihicha mmiri nke ihe nnuku ndị na-etolite ma nke ahụ na-ese n'elu mmiri.
Ọ dị mkpa ka mmiri dị na tank azụ mee ka ọ dị ọcha ka azụ wee nwee ahụ ike. A na-ejikwa ha eme ihe nyocha nke ndu. Nke a pụtara na ihe mkpofu ahụ ghọrọ nje bacteria na-aba uru maka azụ.
E nwere ọtụtụ ụdị nzacha, mana ha niile nwere a ndu, n'ibu na chemical filtration. Na ụdị nza a, o zuru ezu iji dobe akwarium ahụ n'ọnọdụ dị mma.
Nhọrọ ọzọ dị iche iche bụ ịzụta nzacha iche iche. Nhọrọ a dị oke ọnụ ma chọọkwa mmezi. Agbanyeghị, ọ na-enye anyị nnwere onwe ọzọ n'ịhọrọ ihe anyị chere dị mkpa ma anyị nwere ike ịgbanwe otu mkpụrụ akwụkwọ ma ọ bụrụ na ọ kwụsị ọrụ.
Ndị na-ekpo ọkụ na-ekpo ọkụ
Sera Delta Heater - ...
BPS (R) okpomọkụ ...
NICREW okpomọkụ 150 W ...
Ọtụtụ azụ na-achọ mmiri ọkụ ka ha simomie ọnọdụ okike nke ebe obibi ha. Ihe ndị a bụ ngwa dị mkpa ma ọ bụrụ na anyị chọrọ ka azụ ahụ dị mma. Enwere ọtụtụ ndị na-ekpo ọkụ. Ndị kachasị atụ aro bụ ndị nwere akpaka okpomọkụ ụkpụrụ. N'ụzọ dị otú a, ị nwere ike ịhọrọ ọnọdụ dị mma nke azụ ahụ kwesịrị ịnwe ma debe ya.
Akụkụ a na-aghaghị iburu n'uche mgbe zụta kpo okubụ ịhụ na ọ nwere ike ije ozi na oke mmiri nke akwarium anyị nwere. Ọ bụ ezigbo nhọrọ mgbe niile ịzụta nke buru ibu ka ọ ghara ịdaba na nke na ọ naghị ekpocha mmiri niile.
NICREW White Light Ikanam ...
NICREW Aquarium LED Light, ...
NICREW ClassicLED Ikanam Light ...
A na-eji ọkụ eme ihe iji simomie ìhè anyanwụ ma na-enyekwa ọmarịcha ọdịdị mara mma na nke ọma. E nwere ụdị oriọna dị iche iche. Site na tubrị fluorescent gaa na ụfọdụ nwere agba dị iche iche, eriri na ọkụ oriọna.
Ọkụ ọkụ anaghị agbaso ụkpụrụ siri ike dị otú a, ebe ọ bụ ihe gbasara uto. Iji chọpụta ọkụ achọrọ dị, enwere ụkpụrụ nke na-egosi na a ga-eji ya mee ihe ihe dị ka lumens 30 kwa liter mmiri.
Ihe ọzọ dị mkpa na ìhè bụ agba na ike. Ọ bụrụ na anyị nwere ahịhịa mmiri nke mmiri, anyị ga-achọ ọkụ nke na-enye anyị ìhè eke. Ike dị elu adịghị ka ìhè anyanwụ, n'ihi ya, a naghị eji ha ebe niile. Ike nke ọkụ ahụ, ka osisi ahụ ga-eto. N'ụzọ megidere nke ahụ, ha ga-eto ogologo.
NICREW Air mgbapụta maka ...
Bedee Oxygenator akwarium, ...
Tetra APS 50 mgbapụta ...
Ndị a bụ ngwa nke etinyere n'ime akwarium ahụ nke na - eme ka mmụba nke mmiri na, yana ya, mee ka ndu azu na osisi too ndu. Azu na aquatic osisi chọrọ larịị nke etisasịwo oxygen na mmiri na-ebi ndụ. Site na mgbanwe mmiri, nzacha na osisi ọ ga-ekwe omume ikuku oxygenate mmiri. Mana onwere oge mgbe ezughi oke m mara chọrọ ndị na-eme njem.
Ọrụ ya dị mfe. Ha na-adọta ikuku n'ime akwarium n'ụzọ dị otú ahụ na-emepụta egosipụta na mmegharị mmiri.
Ndabere nke ngwaọrụ ndị a bụ na ha chọrọ nlezianya siri ike iji rụọ ọrụ nke ọma. Ikuku nke aghaghachitere aghaghi izere nsogbu nke azu ma obu bulie ahihia nke ruru unyi.
Ha na-enye tankị azụ ahụ ọmarịcha mma ma mepụta gburugburu nke dị mma n'anya, na -emepụta gburugburu ebe mara mma.
Nnwale ọkwa ọkwa mmiri na-egosi
Ulikey Mmiri Ph Meter ...
Ọtụtụ mgbe azụ na-anwụ anwụ na ọ na-amaghị ihe mere. Ọbụlagodi na ịnwere ngwa niile ahụ e kwuru na mbụ, ị ga-amarịrị ọnọdụ mmiri ahụ. Maka nke a enwere ule mmiri.
Mmiri mmiri dịka pH uru (pH), ike zuru ezu (GH), ike ike carbonate (KH), ammonium / ammonia (NH4 / NH3), nitrite (NO2), nitrate (NO3), phosphate (PO4) na iron (Fe) .
Site na mita ndị a, anyị nwere ike ịmata ala mmiri ma mara ma ọ zuru oke.
Enwere m olile anya na iji ngwa ndị a ị nwere ike ịnweta akwarium gị n'ọnọdụ zuru oke.
Nkọwapụta nke akwarium
por Natalia Cerezo eme 2 izu .
Onye na -akọwa mmiri akwarium na -enyere aka idobe mmiri ọcha yana enweghị mmetụta nke ...
por Natalia Cerezo eme 3 izu .
Ọ bụghị naanị na a na -atụ aro ule aquarium, mana enwere ike were ya dị ka ihe dị mkpa iji lekọta ịdị mma mmiri ...
CO2 maka akwarium bụ isiokwu nwere ọtụtụ obere achicha na naanị akwadoro maka ndị na -achọ mmiri mmiri, ebe ọ bụ na ...
Enwere ọtụtụ ihe ịchọ mma nke bụ ezigbo echiche maka ịchọ mma akwarium, site na okwute ma ọ bụ mkpisi ruo ọnụ ọgụgụ kpochapụwo ...
Ihe nzacha akpa azụ bụ ezigbo nhọrọ maka akwarium, nnukwu ma ọ bụ obere, na ọ baghị uru ma ọ bụrụ ...
por Natalia Cerezo eme Ọnwa 2 .
Ihe nzacha AquaClear ga -ada ka onye ọ bụla nọrọla na ụwa aquarium nwa oge, ebe ọ bụ na ha bụ…
Ngwa akụrụngwa akwarium zuru oke dị mma ịmalite, ya bụ, maka ndị na -akwado ụwa azụ na ...
Anyị ekwuola ọtụtụ oge na nke kacha sie ike, yana nke kachasị mkpa, n'oge ahụ ...
Ihe mkpuchi mmiri bụ ihe dị oke mkpa iji sachapụ mmiri nke na -esite na pọmpụ ozugbo wee gbanwee ya ka ọ bụrụ ...
Igwe mmiri akwarium bụ ihe ọzọ dị mkpa iji nwee ike rụọ mmezi nke akwarium anyị na ...
Igwe temometa akwarium bụ ngwaọrụ dị mkpa na -enyere aka idobe okpomọkụ nke akwarium. A) Ee…